Iingcamango zemifanekiso ezi-8 zokuThengisa ishishini lakho kwi-Instagram | Martech Zone
Iingcamango zemifanekiso ezi-8 zokuThengisa ishishini lakho kwi-Instagram
NgoMgqibelo, Septemba 5, 2015 NgoMgqibelo, uJanuwari 2, 2021 Douglas Karr
Rhoqo ngexeshana, ndiza nesicatshulwa esifanelekileyo okanye isiluleko esincinci endinqwenela ukuba sabelane ngaso ekuhlaleni. Endaweni yokuyibhalela nje ngaphandle, ndiyivula Depositphotos mobile application kwaye ufumane umfanekiso omhle. Ndiyilima ndisebenzisa i-iPhone yam kwaye emva koko ndiyivule kwifayile Ngaphezulu kweApp. Ngaphakathi kwimizuzu eli-10, ndinomfanekiso omkhulu onokuthi ukhuthaze ezinye ze Inethiwekhi yenkampani yethu ye-Instagram. Nanku umzekelo:
Inxulumene nantoni na imveliso yentengiso yenkampani yam? Ndifumene kule minyaka idlulileyo ukuba awona mathuba makhulu kunye nabaxumi beze ngenethiwekhi yethu, hayi ngokukhuthaza ukungahambi kakuhle kuyo.
I-Instagram yinethiwekhi yentlalo ebonakalayo ebonelela ngeendlela ezifanelekileyo zokuvula ubomi bam kunye nokwabelana ngayo kwi-intanethi. Ndibeka zonke iintlobo zemifanekiso phezulu - ukusuka eofisini yethu ukuya kubathengi bethu, ukuya kwinja yam… ewe… ezinye zezicaphuno ezikhuthazayo phakathi. Asinabalandeli baninzi, kodwa sineqela elikhulu labahlobo abathanda nabelana noko sikupapashayo.
kunyeHootsuite, ngoku sinokucwangcisa iiposti zethu ze-Instagram ziye kubaphulaphuli bethu! Ukucwangciswa kohlaziyo lwe-Instagram kuye kwasebenza ngakumbi ekucwangciseni ukunyuswa kwabaxhasi bethu.
Ungaluthengisa njani ishishini lakho kwi-Instagram
Umthi weNtlalo Beka ndawonye le infographic emfutshane ukukunceda ukuba ucinge ngezimvo zemifanekiso kunye nevidiyo onokwabelana ngazo ukukhulisa ulwazi malunga negama lakho kunye nokwakha ubudlelwane ekuhlaleni kunye nabaphulaphuli bakho. Banikezela ngemibono yesibhozo yemifanekiso onokuyisebenzisa xa uthengisa ishishini lakho kwi-Instagram:
Bonisa iimveliso zakho (okanye abathengi bakho!)
Bonisa indlela ezenziwe ngayo iimveliso zakho okanye iinkonzo zakho.
Yiya emva kwemiboniso
Bonisa ukuba iimveliso zakho okanye iinkonzo zinokufezekisa
Bonisa ngeofisi yakho kunye nabasebenzi
Yabelana ngeminyhadala oya kuyo
Yabelana ngamaxabiso kunye nenkuthazo
Sebenzisa ukhuphiswano ukufumana abalandeli abatsha
Ewe kunjalo, phantsi kwendlela unokuqhuba uguquko oluthile usebenzisa Iqhosha lokuthenga lika-Instagram!
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa amakhonkco okudibana kweli nqaku.
tags: izimvo zomfanekisophe fumlelweinstagramyokuthengisaIividiyo ze-instagram
Indlela yokwakha kunye nokukhulisa uluhlu lwakho lwe-imeyile
Uyenza njani iMixholo ekwabelwanayo ngayo